मेरो Pinterest खाता बाट एक पिन कसरी मेटाउने? ➡️ अनुयायी ▷
म कसरी मेरो Pinterest खाताबाट पिन हटाउने?
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 324
Pinterest एक ज्यादातर दृश्य मंच संग एक सामाजिक सञ्जाल हो, यसको मतलब यो हो कि यसको प्रयोगकर्ताहरु फोटो पोस्ट गर्ने अवसर छ र बोर्डहरु को एक प्रकार मा उनीहरु लाई साझा गर्नुहोस्, जुन उनीहरु आफैंले आफ्नो स्वाद र प्राथमिकताहरु अनुसार सिर्जना गर्नेछन्। यी प्रकाशनहरु वेब पृष्ठहरु वा अन्य अनुप्रयोगहरु बाट अपलोड गर्न सकिन्छ।
अब कहिले के हुन्छ तपाइँ अब एक निश्चित पिन चाहानुहुन्छयो कसरी यी प्रकाशनहरु लाई यस अनुप्रयोग मा विशेष गरी बोलाइएको छ, उनीहरु बोर्डहरु मा जारी छन् कि हामीले उनीहरु को लागी नियत गरेका छौं, जब बाट हामी उनीहरुलाई हटाउछौं, अनुप्रयोग को लागी यस कार्य को लागी एक समारोह छ। अर्को, हामी यो कसरी गर्ने भनेर व्याख्या गर्नेछौं।
कसरी मोबाइल फोन आवेदन बाट पिन हटाउन:
पहिलो कुरा स्पष्ट छ अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुहोस्, यो गर्न को लागी तपाइँको कस्टम छ।
एक पटक तपाइँ आवेदन प्रविष्ट एकपटक तपाइँ पत्ता लगाउन र प्रतिमा छान्नु पर्छ सिल्हूट अनुरूपयो एक हो कि तपाइँ तपाइँको खाता को प्रयोगकर्ता विकल्पहरुमा पहुँच दिनुहुनेछ।
यो को वैकल्पिक प्रदर्शन हुनेछ बोर्ड चयन गर्नुहोस् जसमा पिन तपाइँ मेटाउन चाहानुहुन्छ अवस्थित छ।
एक पटक प्रकाशन छान्नुहोस् कि तपाइँ मेटाउन चाहानुहुन्छ कि तपाइँ यसमा क्लिक गर्नु पर्छ जब सम्म प्रणाली विकल्प को एक श्रृंखला प्रदर्शित गर्दछ।
एक पटक प्रणाली तपाइँ तैनात विकल्प तपाइँ पत्ता लगाउन र एक कि संस्करण संग मेल खान्छ छान्नु पर्छ। यो आइकन द्वारा संकेत गरीएको छ कि पेन्सिलले सन्दर्भ गर्दछ, सम्पादन विकल्प चयन गर्नुहोस्।
अन्ततः, वैकल्पिक मेटाउनुहोस्।
यस समयमा सुरक्षा कारणहरु को लागी प्रणाली को पुष्टि गर्न को लागी सोध्नेछ हटाउने अनुरोध, मेटाउने विकल्प फेरि थिच्नुहोस्।
कसरी कम्प्यूटर को लागी आवेदन बाट पिन हटाउन को लागी:
यस अवस्थामा, तपाइँ अनुप्रयोग को वेब संस्करण बाट Pinterest पृष्ठ प्रविष्ट गर्नु पर्छ। को सधैं जस्तै उस्तै तरिका तपाइँ पक्कै गर्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाइँ आवेदन प्रविष्ट गर्नुहुन्छ तपाइँले गर्नु पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् र प्रतिमा चयन गर्नुहोस् कि समोच्च संग मेल खान्छ, यो एक हो कि तपाइँको खाता को प्रयोगकर्ता छनौट को लागी प्रविष्टि को सुविधा हुनेछ।
यो तपाइँलाई विकल्प दिनेछ बोर्ड छान्नुहोस् जसमा पिन तपाइँ मेटाउन चाहानुहुन्छ अवस्थित छ।
तपाइँको माउस को मद्दत संग, पिन तपाइँ मेटाउन चाहानुहुन्छ, एक पटक चयन गरीयो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो कार्य को शीर्ष मा विकल्प को एक श्रृंखला प्रदर्शन गर्दछ चयनित छवि.
तपाइँ पत्ता लगाउनुहोस् र सम्पादन आइकन चयन गर्नु पर्छ, यो एक पेन्सिल को आकार मा प्रणाली मा प्रतिबिम्बित हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक तपाइँ यो विकल्प छान्नुहोस् प्रणाली तपाइँ मेटाउन को लागी विकल्प दिनेछ प्रकाशन, यस मामला मा यसलाई मा प्रेस, यो के हो कि तपाइँ पिन हटाउन के गर्न चाहानुहुन्छ।
यो प्रणाली पछि, अघिल्लो मामला मा जस्तै यो तपाइँलाई प्रमाणित गर्न वा चयनित पिन मेटाउन को लागी तपाइँको इच्छा को पुष्टि गर्न को लागी सोध्नेछ, यस मामला मा तपाइँ फेरि मेटाउने विकल्प को चयन गर्न को लागी हुनेछ।
यी हुन् पिन हटाउने तरिका दुबै वेब र आवेदन को मोबाइल संस्करण बाट।
1 कसरी मोबाइल फोन आवेदन बाट पिन हटाउन:
2 कसरी कम्प्यूटर को लागी आवेदन बाट पिन हटाउन को लागी:
कसरी पिन्टेरेस्टबाट सीधा सन्देशहरू पठाउने?
कसरी पिन्टेरेस्टबाट सम्पूर्ण बोर्ड हटाउने?